ကျောင်းမှာစကားပြောတတ်သလား (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ကျောင်းသားများကို porn နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ; သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အကြောင်းကိုသူတို့ကိုသင်ပေး
မကြာသေးမီကယူကေဗြိတိန်သတင်းခေါင်းစဉ် -“ဆရာများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသင်ခန်းစာများပေးသင့်ပြီးကျောင်းသားများအား 'မကောင်းဘူး' ဟုပြောသင့်သည်။ " ကလေးများအတွက်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးသောပညာရေးသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဖြုန်းတီးပါစေနဲ့။ ထိုကဲ့သို့သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်အလင်းထက်အပူပိုမိုပေးမည့်အဆုံးမဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲများထဲသို့သာပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်။
အရေးအပါဆုံး, ကျောင်းများကြွယ်ဝသင်ကြားမှုအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်လိမ့်မယ်။ junk အစားအစာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဥပမာစုပေါင်းအဖြစ်လူသိများ, ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အစာစားချင်စိတ်ယန္တရားများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံစတင် pad ပါပြင်ဆင် ဆုလာဘ် circuitry။ ဦးနှောက်၏ဤ primal တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြီးသောအသံရှိပါတယ်နှင့်၎င်း၏ဦးစားပေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြပြီ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ furthering ရှင်သန်မှုနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအောင်မြင်မှု။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, အစားအစာနှင့်လိင်၏ဖြားယောင်းဗားရှင်းအားကောင်းကြောင့်သက်ဝင်စေပါ။
ဤသည်ရှေးဟောင်း circuitry မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်၏အလယ်ဗဟို။ ကျနော်တို့ကငျြ့ဝတျစီရငျခကျြမြားနှငျ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုအပါအဝင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကို, အောင်ပြုလုပ်ရန်အပေါ်အားကိုး။ ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် kilter ထဲကပစ် Planet ကိုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အသက်အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုသည်မည်မျှနားလည်ခြင်း။
၏ခေါင်းစဉ် ဆယ်ကျော်သက် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း ထို့အပြင်လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်၏ Hyper-plasticity အကြောင်းကိုကျောင်းသားသင်ပေးဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအခါသမယပေးထားပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်စ neuron အသစ်တွေတစ်ခုပေါက်ကွဲမှုစတင်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံး (လိင်အပါအဝင်) အသစ်များကိုအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်လူကြီးအဘို့ထိုသူတို့တက် wiring နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အသုံးပြုပုံအသုံးမပြုတဲ့အာရုံကြော circuitry ပြန် pruned ပါလိမ့်မည်နှင့်အာရုံကြော circuitry ထိန်းသိမ်းထား (အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသင်ယူအောင်) စှာကပိုထိရောက်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
ကျောင်းသားများဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အကျင့်နှင့်မည်သို့လွယ်ကူစွာက High-arousal လှုပ်ရှားမှုများကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဆယ်ကျော်သက် အလိုမရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များပင်အထီးကြွက်များကြိုက်နှစ်သက်စေနိုင်သည်ကိုသင်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ခံရ လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် အေးစက်နေဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထတူတဲ့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိင်?
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုသည်… um …လိင်တံနှင့်ကွန်ဒုံးကဲ့သို့အတူတကွသွားနေသည်ကိုကလေးများသိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့အဆင်သင့်လား၊ မ လိမ့်မည် သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့လိင်သဘာဝါယာကြိုး။ ထို့နောက်အစောပိုင်းလူကြီး, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်များကလုံးဝ လိမ့်မည် သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများလျော့ပြေကန့်သတ်, အသုံးမပြုတဲ့ circuitry ကျောသုတ်သင်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသိရှိထားခြင်းကဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အလွန်လိုအပ်နေသောကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ရှေ့တန်း cortexes (“ စဉ်းစားကြည့်ကြစို့၏နေအိမ်”) သည်နှစ်ဆယ်ကျော်အထိဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံချို့တဲ့သောရွေးချယ်မှုများသည်အံ့ ly စရာကောင်းလောက်အောင်အရေးပါသည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုပြတင်းပေါက်.
ကျောင်းများသည်ကျောင်းသားများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏လျှို့ဝှက်အန္တရာယ်များအကြောင်းသင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား gonzo အကြောင်းအရာကျော်လွန်သွားပါ။ ဒီနေ့နှစ်ခုလုံး ပို့ခြင်း နှင့် နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရ အန္တရာယ်များ။ သွားကြောင်းဂြိုဟ်တု / cable ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိုင်းများပေါ်တွင်အဆိုပါသတင်းစင်တစ်ခုရံဖန်ရံခါလျှို့ဝှက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်းအခမဲ့သန်းခေါင်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ကြသည်2dial-up တစ်နှစ်ခွဲနာရီ porn မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လျက်ပေးဆောင်ရန်အဘို့အနာရီစောင့်ဆိုင်းနေ, ဧည့်ခန်းထဲမှာကို VHS ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ကြောင်းကို အဆင်မပြေခရက်ဒစ်ကဒ်ဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ။
အခုတော့အပေါ်ယခင်က undreamed ပြုမူသောအမှု high-definition ဗီဒီယိုများရှိပါတယ် ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ အဆိုပါအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးအခမဲ့သည်အဘယ်မှာရှိ။ ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုများပင် stream, ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုသူများသည်သူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလမ်းကြောင်းမချန်မထားရန်လိုသည်။ အသုံးပြုသူများအမာခံကလစ်များများစွာ tabs များဖွင့်လှစ်နိုင်, ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုအတွင်းမှာတာရှည်အဘို့အလံကိုမလိုပေ။ အသုံးပြုသူများကအိပ်ရာမှာအငြိမ့်အပါအဝင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်နောက်ဆုံးစမတ်ဖုန်း (နှင့်ယခု Google Glass ကို) ရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုအိမ်မှာ, သို့မဟုတ်ကျောင်းပြီးနောက်, နှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်ကို TV များအတွက်ကွန်ပျူတာအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်း။
မြင့်မားတဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဦးစားပေးသူတို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကြောင်းသှေးဆောငျ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်မှု စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်, နှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အရွယ်ရောက် ဦး နှောက်ထက်စွဲဖို့ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်အထူးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံများအထူးသဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်သည်
အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်စီးကရက်သည်ဘိန်းဖြူထက်စွဲလမ်းစေသည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့် ဦး နှောက်လေ့ကျင့်မှုဖြစ်သည်။ ဘိန်းဖြူသည်ပိုမိုကြီးမားသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာထိုးနှက်မှုကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊ (ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအသစ်များကိုနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့) စီးကရက်များသည်မကြာခဏအာရုံကြောဓာတုဗေဒထိခိုက်မှုများ (အထူးသဖြင့် dopamine) ကို puff တစ်ခုစီ (သို့မဟုတ်ကလစ်နှိပ်ပါ) ဖြင့်ပေးသည်။ ဗီဒီယိုအသစ်များဖြင့် dopamine ကိုမြှင့်တင်နိုင်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်၊ အကြောင်းမှာနာတာရှည်မြင့်မားသော dopamine သည်သုံးစွဲသူများစွာတွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တစ်ဦးကပြန်လည် porn အသုံးပြုသူ porn ပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်လိုကရှင်းပြသည်:
ခေတ်သစ် porn ဦးနှောက်ကိုအခမဲ့ supersize အစားအစာများကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထားများစျေးပေါ, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရတစ်ဦးမြင့်တက်ဆိုးရွားအကျိုးဆက်များခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, 15 နှစ်ပေါင်း (1986-2000) ထက်လျော့နည်းအတွက်အောထွက်လာသည်။ သငျသညျ 1950 အတွက်အဝလွန်ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အများကြီးပိုခက်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ, porn ထောက်ပံ့ရေးပင်ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် junk အစားအစာပေးဝေရေးထက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သငျသညျ 1990 အတွက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာနိုင်သကဲ့သို့ယခု 2013 ၌တည်ရှိ၏ထက်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အများကြီးပိုခက်ခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သော်လည်းမိုဘိုင်းဝက်ဘ်၏မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဒွန်တွဲအီလက်ထရွန်းနစ်၏စျေးနှုန်းထဲမှာလျှော့ချရေးအငယ်နှင့်အငယ်ယောက်ျားတွေလက်တွေ့ကျကျန့်အသတ်အပြောင်းအလဲနဲ့အာဏာ 24 /7လက်လှမ်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်ထားပြီးသာ။ ယနေ့တွင်ပျမ်းမျှ 13 နှစ်အရွယ်တစ်ခုလုံးကိုအိမ်ထောင်စုနှောင်းပိုင်း 90s အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ကသူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာပိုပြီး processing power ရှိပါတယ်။ (ဒါဟာအပြော 1993 vs. 2003 vs. 2013 အတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီကြည့်ရှုအားပေး megabytes အတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ပမာဏ၏တစ်ဦးတွက်ချက်မှုလုပ်ဖို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပါလိမ့်မယ်။ )
ဤတွင်စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု - ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းမည်သည့်လိင်မှုကိစ္စကိုမဆိုလုပ်ဆောင်သောမည်သည့်လူမျိုးကိုမဆိုလက်တွေ့ကျကျတွေ့နိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှု ၂၄/၇ သာရှိတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာပျော်ရွှင်မှု၊ ဈေးကြီးတဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့လာတာပါ၊ ကျွန်မရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာဘဝ၊ ဆက်ဆံရေးနဲ့ erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုပျက်စီးစေတယ်။
ယောက်ျားလေးများသည်၎င်းတို့အားအစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်သို့တားဆီးနိုင်ကြောင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပုံကိုပညာပေးခြင်းသည်သေချာသည်မှာလုံးဝမပြီးဆုံးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးပညာရေးနည်းလမ်းမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ 'မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲ' ကဲ့သို့လွတ်လပ်မှုလျှော့ချရေးကျရှုံးမှု။
ယောက်ျားလေးအားလုံးအလိုအလျောက်ရပ်သွားမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းပညာတတ်သူများကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့သည်ထိုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်နေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးသူတို့သည် ပို၍ သတိကြီးစွာပြုကြလိမ့်မည်။ လူတိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဒီ 'ကျွမ်းကျင်သူများ' ကညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောနေတာကိုငါမနှစ်သက်ပါ nofap porn လူတွေ broadsheet သတင်းစာများအတွက်ရေးသားခြင်းထက်သင်ဘာလုပ်တယ်အကြောင်းကို ပို. သိကျွမ်းခြင်းပညာရှိပါတယ်။
“ ပုံမှန်” နှင့်“ ပုံမှန်” နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်
ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းသည်သာမန်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဟုထင်ရသည့်အတိုင်းအတာအထိရှိသည်။ ဤသည်ကလေးတွေဝေဖန်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဆီသို့ဘက်လိုက်မှုအရွက်။ သို့သော်၊ “ လူတိုင်းသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်” ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာပြုလုပ်ရန်မအာမခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များကိုမသိရှိမီမည်မျှရေပန်းစားသည်ကိုစဉ်းစားပါ။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုနားမလည်သောသုံးစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါကအန blind တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု ပြဿနာများ, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံး, ထူးထူးဆန်းဆန်း porn အရသာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိစ္စများ, စတာတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ overconsumption ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများမြင့်တက်ပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရှိရင်လက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့သူကလေးတွေတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အသက်အဘို့ကျိုးကြယူဆ။ သူတို့ကရန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းတွေအကြောင်းနားမထောင် သူကား, ဆုတ်ခွာ braved, ညီမျှခြင်းကနေညစ်ညမ်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုမြင်ကြပြီ။
ကလေးတွေရံဖန်ရံခါလက်ခံရရှိကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှာအရေးပါ bit နဲ့မိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်၏ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပေါ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဆုတ်ခွာ ရောဂါလက္ခဏာ: အိပ်မပျော်, ဦးနှောက် မြူ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ မြန်ဆန်သောစိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ ချွေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ မသိရှိပါကထိုရောဂါလက္ခဏာများသည်သူတို့ကိုအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းမှုသို့ပြန်ရောက်စေနိုင်သည်။
အစိုင်အခဲသတင်းအချက်အလက်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စားချင်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်စေရန်သင်ယူခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ။ ထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူလူမှုရေး, အဖြစ်သဘာဝကျကျချိန်ခွင်လျှာအားပေးကြောင်းအများအပြားနည်းစနစ်ရှိပါတယ်, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းမည်သူမဆိုမှပြစ်မှုမရှိဘဲမည်သည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်နည်းစနစ်-အားလုံးသည့်နှင့်အပန်းဖြေ။ ကျောင်းသားများကိုလည်းတရားဝင်ထောက်ခံမှုပိုလျှံလက္ခဏာတွေ addressing များအတွက်ရရှိနိုင်ပါကဘာလဲဆိုတာလေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့“ ကောင်းသောညစ်ညမ်းသော” နှင့်“ ဆိုးညစ်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ” ကိုသင်ကြားခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ
ဆယ်ကျော်သက် 30 နှစ်ကြားရှိမရှိကြပေ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကသူတို့ကိုသဘာဝကစိတ်လှုပ်ရှား-ရှာဖွေနေသူများနှင့်အသစ်အဆန်းများနှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်စပ်စုလုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးအားဖြင့် inbreeding ရှောင်ရှား, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမိမိတို့၏ဇာတိအနွယ်တို့တွင် left အဘယ်ကြောင့်ဤအပင်သဘောထားတွေရှိပါတယ်။
ဆရာများအကြံပြုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကလေးများကကပ်ငြိမည်မဟုတ်၊ ဒီလိုနူးညံ့တဲ့ပေါ်လစီဟာသူတို့နှစ်သက်တဲ့ဘူဖေးစားသောက်ဆိုင်မှာ“ မုန်လာဥနီတုတ်ကောင်းကောင်းရွေးချယ်မယ်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ချပစ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ ဟုတ်တယ်
သူတို့က "carrot-stick" porn ကိုကပ်ထားခဲ့ရင်တောင်သူတို့ကဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ကို pixel များနဲ့ဆက်သွယ်နေမှာဖြစ်ပြီးတကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမဟုတ်ပါ။ ဒီဆောင်းပါးကိုသင်ယူခဲ့သည့်အရာကနောက်ပိုင်းတွင် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
(၂၀- တစ်ခုခု) ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ဘဝ၌အမျိုးသမီးများနှင့်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းမရှိသော်လည်းဘာမျှမခံစားမိပါ။ ငါလုံးဝ horny မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကအနည်းဆုံးလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါဟာလိင်ကွဲလိင်ကွဲသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ ငါသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းခံစားခဲ့ရသောအရာကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရွေးချယ်နိုင်လျှင် 'ဂြိုလ်သား' ဟူသောစကားလုံးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုမည်။ ဒါဟာငါအတုနှင့်နိုင်ငံခြားခံစားရတယ်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်နှင့်အတူထိုင်။ ညစ်ညမ်းမှုမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဆို ၀ င်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းချက်ချင်းပင်ချိုသာစွာခံစားနိုင်သည်။ Porn ဟာကျွန်တော့်အတွက်လုံးဝသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသဘာဝပါပဲ။ ငါအမျိုးသမီးများနှင့်သဘာဝကျကျခံစားရသင့်သောအရာကိုလုံးဝပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ! ငါမိန်းကလေးတွေကိုမြင်တယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာအရမ်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ချစ်စရာကောင်လေးတစ်ယောက်တောင်တောင်မှ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိပေမယ့်လိင်အလိုဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူး။
စကားမစပ်, အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော်လိင်စိတ်နိုးထပျြောမှေ့စကြောင်းဆယ်ကျော်သက်သင်ပေးရမယ်လို့ငြင်းခုန်။ ဒါကကျနော်တို့သကြားကိုကြိုက်ဖို့ကလေးတွေသင်ပေးရမယ်လို့ငြင်းခုံကဲ့သို့ဖြစ်၏။ လိင်စိတ်နိုးထ၏အယူခံဝင်, သကြားကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်နှိုးဆွမှုကိုမှတ်ပုံတင်သည့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးနေသည်ကိုသတိရပါ။ သို့မှသာဆယ်ကျော်သက်များသည်မျိုးပွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအချက်များကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ ပိုနည်းသောအချက်မှာခိုင်မာသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး ဦး နှောက်ပါသောလူကြီးများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်တန်ပြန်တန်ဘိုးဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် "Accelerator အလုပ်လုပ်တယ်; ဘရိတ်တက်ညှိ! "
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အင်တာနက် porn ပြဿနာများ ၏စိတ်လှုပ်ရှားအကြောင်းပိုမိုများမှာ သစ်ခြင်း အကြောင်းအရာထက်, ဒါမှမဟုတ်စောင့်ကြည့်သုံးစွဲပင်အချိန်။ အမှန်မှာ၊ အချို့သောယောက်ျားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်သည့်ရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများကိုပင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ ဒါကအံ့သြစရာမရှိပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ကရုပ်ပုံများကို“ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုလျှင်ပင် ဦး နှောက်၏မူလအစိတ်အပိုင်းသည်ဝတ္ထုသစ်များအတွက်မီးပန်းလောင်ကျွမ်းသွားသည်။ တိုတိုပြောရရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဦး နှောက်ဟာအသုံးပြုသူလူငယ်တစ် ဦး ဟာသူ့ရဲ့အားကောင်းတဲ့နှိုးဆွမှုနဲ့“ ကောင်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ” ပဲဖြစ်ဖြစ်“ ဆိုးညစ်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ” ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်၊
ဒီနေ့၏မြန်နှုန်းမြင့် porn ဖြစ်ရပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်များကို ဦး နှောက်၏အစာစားချင်စိတ်ယန္တရားမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဆယ်ကျော်သက်များအားရှင်းပြရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယင်း၏ပင်မအစီအစဉ်များနှင့်ဒီနေ့၏အမှိုက်ပုံးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ဤရှေး ဦး စားထားရာများ၌မည်သို့ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသင်ပေးပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အကြောင်းကိုသူတို့ကိုသင်ပေး။ မြီးကောင်ပေါက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် pixel များသီးသန့်ချိတ်ဆက်ထားပါက၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်လိင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသောပိုးပန်းခြင်းအပြုအမူများ၊ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဦး နှောက်ကအသုံးမပြုတဲ့ဆားကစ်တွေကိုပြန်နုတ်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွား၊
အများကြီးဆွ (နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ပို. ပို. ပျင်းစရာကြီးပွားနိုင်သည့်) နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေခြုံငုံအပျော်အပါးလျှော့ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, အာရုံခံစားမှုရှာ-အဖြစ်စွဲလမ်းမောင်းနိုငျပုံကိုလည်းသူတို့ကိုသင်ပေးပါ။
ဘယ်လိုသဘာဝကသူတို့စားချင်ထိန်းညှိဖို့သူတို့ကိုသွန်သင်အဖြစ် overconsumption ၏လက္ခဏာများ, ဆုတ်ခွာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနှင့်လိုအပ်ပါကဘယ်မှာကူညီရ။
ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများတာရှည်စွာစားသုံးခြင်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ခြင်းကယနေ့ကလေးငယ်များအားလှုံ့ဆော်ပေးသောအစားအစာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအထောက်အကူများပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုမဆိုလိင်ပညာရေးကြိုးစားအားထုတ်မှု၌ရှိသကဲ့သို့, သင်ကြားလုပ်ပေးသူလူကြီးများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအလွန်အရေးပါသည်။ ကနေဒါဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအထဲကထောက်ပြသကဲ့သို့,
ငါ porn ကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုကန့်သတ်သင့်၊ မသင့်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ယောက်ျားလေးတွေကိုသူတို့ကစစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဘယ်လိုတားဆီးနိုင်မလဲ၊ စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးတဲ့ညီမျှခြင်းကိုဖြည့်စွက်ဖို့သေချာပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲ၏ရလဒ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသံသယဖြစ်စရာမလို၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောစစ်ပွဲကဲ့သို့သောကျရှုံးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်
ယောက်ျားလေးအားလုံးသည်အလိုအလျောက်ရပ်သွားလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်းပညာတတ်သူများသည်ထိုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်နေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံး၎င်းတို့သည် ပို၍ သတိကြီးစွာပြုကြလိမ့်မည်။ nofap ပေါ်ရှိလူတိုင်းသည်သတင်းစာများတွင်ရေးသားနေသူများထက်ညစ်ညမ်းသည်သင့်အားမည်သို့ပြုသည်ကိုပိုမိုသိနားလည်ထားပါကဤ 'ကျွမ်းကျင်သူများ' သည်ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သည်။